BNI- “TJE 2018”: 10 andro sisa ho an’izay te hifaninana | NewsMada
BNI- “TJE 2018”: 10 andro sisa ho an’izay te hifaninana
Mampahatsiahy ny BNI fa 10 andro sisa homena ireo tanora mpitantana orinasa te hifaninanana amin’ny TJE (Trophée du jeune entrepreneur), taona 2018, andiany faha-14. Efa nosokafan’ny BNI, nanomboka ny volana avrily 2018, io fifaninanana io, ho an’izay tanora mpandraharaha, lahy na vavy, manana fanamby hampandroso ny sehatra misy azy. Ho fitsinjovana hanomezana herijika mitovy ho an’ireo te hifaninana ny antony hanairan’ny BNI ireo tanora mpandraharaha rehetra.
Loka roa lehibe no homena amin’ity 2018 ity : ny « TJE croissance + », efa fanomezana mahazatra hatramin’izay. Ho an’ireo mampiasa vola tsy latsaky ny 60 tapitrisa ariary io loka io. Ankoatra ny loka azo, mahazo findramam-bola tsy misy zanany mandritra ny taona iray ny voalohany, hahazoana mampivelatra hatrany ny seha-pihariana ho an’izay voafidy.
Ny loka vaovao ny “Startup TJE”, ho an’izay manolotra tetikasa vaovao ary hita fa hahomby any amin’ny faritra misy azy sy ho an’ny firenena ankapobeny. Manome fanampiana tsy averina aloha ny BNI, ankoatra ireo tolotra isan-karazany, visa Lokanga, Mvola, Fiantohana Miarina, BNI-Net. Manoro hevitra sy manampy izay voafidy ny Axian sy ny Telma.
Amin’ireo rehetra ireo, misy sampana manokana hatao hampandroso ny orinasa madinika sy salantsalany ny BNI Madagascar. Ny 9 oktobra ho avy izao ny fe-potoana farany firotsahana ho mpifaninana, hita ao amin’ny www.bni.mg ny tsara ho fantatra rehetra ary alefa amin’ny tje2018@bni.mg ny antontan-taratasy fandraisana anjara.